Kenya oo War kasoo saartay dagaalkii Cuslaa ee ka dhacay Balad-xaawo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kenya oo War kasoo saartay dagaalkii Cuslaa ee ka dhacay Balad-xaawo
Ardaan Yare 25 January 2021
Dowladda Kenya ayaa ka hadashay dagaalka Magaalada Beled-Xaawo ee Gobolka Gedo oo dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay inay soo qaadeen “jabhad ay soo hubeysay” Kenya.
Wasaaradda arrimaha dibedda Kenya ayaa qoraal ay u dirtay guddoomiyaha Midowga Afrika ku sheegtay inay aad uga walaacsan tahay dagaalka kasoo cusboonaaday xuduudda, gaar ahaan magaalada Beled-Xaawo ee gobolka Gedo.
Kenya waxay sheegtay in dagaalka uu u muuqdo inuu u dhaxeeyo ciidamada dowladda fedeeraalka Soomaalia iyo kuwa maamulka Jubaland.
Kenya ayaa intaas ku dartay in walaaceeda ugu weyn uu yahay in dagaalka uu dhaliyo barakaca dadka shacabka, uuna horseedo qaxooti badan oo magan-galyo doon ah oo soo gala Kenya.
Kenya, oo aan si toos ah qoraalkan uga jawaabin eedeynta dowladda Soomaaliya ee ah inay soo hubeysay jabhad fallaago ah ayaa ku baaqday in dagaalka deg deg loo joojiyo.
Wasiirka Warfaafinta dalwadda Soomaaliya ayaa u sheegay warbaahinta inay ciidanka dawladdu jebiyeen “jabhaddii fallaagada” ee soo weerartay.
Cusmaan Abuukar Dubbe ayaa waxa uu sheegay in maxaabiis badan lagu qabtay dagaalka, islamarkaana ciidanka dawladdda ay gacanta ku hayaan magaalada Beled Xaawo.
SAWIRRO:-Madaxweynaha Puntland iyo James Swan oo kulan xasaasi yeeshay
Puntland oo Maanta gacanta ku dhigtay Qaraxyo la doonayay in lagu…